Fizarana 1 Dingana an-dàlam-pianarana fananganana fanaovan-trano amin'ny Solar Panel ho an'ny fanombohana - Kimroy Bailey Group
23Mey Enga anie 23, 2020
Ao anatin'ity andiany Step by Step Solar izay tanterahan'ny Trot Bailey University ity dia manome torolàlana feno momba ny fomba fametrahana takelaka solar amin'ny tampon-trano iray i Kimroy Bailey. Araho izao, ity horonantsary ity dia mandrakotra ny dingana rehetra natao hametrahana takelaka solar 12 eo amin'ny tampon-trano. Ny horonantsary dia mamaritra ny fomba fametrahana ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny fanenenana an-tsokosoko sy famaranana, ary asongadiny aza ireo fitaovana ilaina amin'ny fanatanterahana ilay asa haingana sy amin'ny matihanina. Ho an'ny blueprint feno hametrahana rafitra tontolon'ny solar izay azonao atao ny mividy ny Dingana Làlan-dàlana Step by Step Solar izay manome fitaovam-pitantanana tanana miaraka amin'ny horonan-tsary avo lenta ary fitaovana fianarana hitari-dàlana anao hatrany am-piandohana ka hatramin'ny fametrahana ny rafitry ny sun-honenana feno.
Kitiho ny bokotra milalao etsy ambony hijery raha ny fizarana voalohany amin'ny dingana vita amin'ny dingana fiofanana amin'ny sehatra Solar.
Lisitry ny votoaty horonantsary ho an'ny torolàlana feno momba ny fomba fametrahana takelaka solar eo amin'ny rooftop for Beginners
1:48 - antsipirihany momba ny takelaka solar. Fanitsiana - 250W tsy 250kW (Misaotra an'i David James)
2:04 - 8 ora isan'andro x 3kW (fahaiza-manao tanteraka = 24kWh / andro tsy 12kWh Ity no torolàlana ho an'ny lohahevitra sasantsasany amin'ny sombin-tsofina amin'ny dingana Solar Video 1 avy amin'ny Kimroy Bailey Group.
00:18 - Inona ireo Fitaovana an'ity herinaratra solarWort 3,000W ity
1:48 - antsipirihany momba ny takelaka solar ary ny Fahaizan'ny System
2:15 - lamasinina Aluminum - Ireo no ampiasaina amin'ny fiarovana ny takelaka amin'ny masoandro amin'ny tafo
3:07 - Farany sy Mid Claps - Ireo no ampiasaina amin'ny fiarovana ny takelaka amin'ny masoandro amin'ny Aluminum Riles.
3:39 - Mampiasa Power Tools sy Allen Keys hametrahana ny panelinao masoandro mandritra ny fametrahana
4:05 - fiarovana amin'ny fametrahana ny tontolon'ny masoandro
4:20 - AZO ATAO VOAO 5:01 - TSY MISY INDRINDRA
5:38 - Miasa amin'ny orana
6:34 - Mandra-pahoviana no hanatanterahana ny fametrahana ny masoandro
7:05 - Fifandraisana elektrika an'ny Solar Panel: Fifandraisana an-tsofina, fifandraisana Parallel ary fifandraisana fifandraisana-Parallel
8:45 - Fitaovana fiarovana ho an'ny fametrahana ny Solar sy Fitaovana hafa ilaina ho an'ny vao manomboka mametraka rafitra solar-matihanina.
9:33 - Manamafy ny Mid-Clamp miaraka amin'i Allen Key
9:58 - Tendrina sy rivodoza / rivo-doza
10:43 - Hamarino fa miatrika ny tampon'ny tariby ny tariby anao.
11:49 - Fametrahana efamira efatra voalohany vita (1kW amin'ny herinaratra napetraka)
12:18 - Mampifandray ny tariby elektronika amin'ny takelaka 4 voalohany (1kW vita).
12:46 - Ahoana ny fanaovana fifandraisana an-tserasera eo amin'ny takelaka solar, ny torolàlana ho an'ny fanombohana
12:58 - Fomba fanamboarana fifandraisana paralel mandritra ny fiofanana amin'ny fametrahana ny Solar ho an'ny fanombohana
13:55 - Manomboka ny laharana faharoa amin'ny fametrahana ny panel tontolon'ny masoandro
14:15 - fiafaran'ny laharana faharoa sy tapany fiofanana amin'ny fametrahana ny masoandro
15:44 - Fikajiana fiofanana momba ny fametrahana ny masoandro: Afaka mametraka vata fampangatsiahana ve ny jiro aelin'ny masoandro?
17:33 - Izay tafiditra ao amin'ny Dingana amin'ny alàlan'ny Step Solar Course
19:00 - lanjan'ny Solika Solika
20:43 - Manomana ny fampitaovana sy ny fahombiazanao amin'ny fametrahana
21:17 - Fanombohan'ny takelaka fahatelo izay mifandray amin'ny sampana roa hafa.
22:11 - Ahoana ny fomba fametrahana Solika Solika rehefa voafetra ny atin'ny trano
22:25 - Toro-lalana sy Angle izay tokony ho atrehin'ireo takelaka masoandro mandritra ny fametrahana.
FIVORIANA FOTOTRA FOTOTRA IZAY Guys dia nihaino ny valin-teninao ianao ary fantatray fa MAHAY Zava-dehibe amin'ny fandatsahan-jiro ny fiarovana. Ekenay fa tsy ity no horonan-tsary fametrahana solar azo antoka indrindra. Raha ny toro-làlana azo antoka dia voatonona mazava ao amin'ny 4:02 sy 4:20 toy ny PPE sy Harnesses. Nomena toky fa ny làlan-dàlan'i Step Solar ao amin'ny Internet dia manana toko iray manontolo natokana ho an'ny OSHA sy ny fitsipiky ny fiarovana amin'ny masoandro.
Atombohy ny vola miditra amin'ny orinasa indostrialy multi-trillion dolara. Midira ao amin'ny TeamKB, atombohy amin'ny orinasam-pametrahana solar anao na alao ny tokantranonao ary apetraho tsara ny harenanao. The Kimroy Bailey Group dia orinasa multibillion-dolara ary orinasa iraisam-pirenena Interactive Training, Business Process Outsourcing, consultation, and Software Development orinasa ho an'ny Orinasa Reniroazo Indray.
Ny vondrona Kimroy Bailey dia mampiditra am-pahatoniana ny famokarana angovo azo havaozina miaraka amin'ny Robotika sy ny fahiratan-tsaina. Ny dingana nataon'i Step solar dia nanofana mpianatra maherin'ny 18 tapitrisa avy amin'ny firenena 92 ​​sy fiteny 23 samy hafa. Ny tarika KB dia manana birao eran-tany 25 ao anatin'izany ny Istanbul, Barcelona, ​​Hong Kong, Guangzhou, New Dehli, Hamburg, Zurich, ary Miami. Mifandraisa aminay amin'ny [mailaka voaaro] na 24/7 Global WhatsApWhatsApp
The Kimroy Bailey Group an'ny orinasa: KB Robotics, KB fanavaozana ary ny Foundation Foundation, Ny Oniversite Trott Bailey, Lahatsary Oasis amin'ny fianakaviana Trott Bailey, ary ireo mpamatsy vola rehetra dia mpikambana ao amin'ny Trott Bailey Family Group of Company izay an'i Kimroy, Sherika vadiny tsara tarehy ary ilay zaza mahafinaritra azy, Keilah Trott Bailey. Ny Baileys 'mirehareha mino an'i Popsie (Andriamanitra) sy ny herin'ny Ràn'i Jesosy Kristy 🏆. Ny tanjonay tsotra dia ny hanampy anao, hahazoana sy manankarena avy amin'ny fitomboana manerantany amin'ny indostrian'ny masoandro. Ho an'ny fianakavianao, ny tenanao, ny orinasanao! #StepByStepSolar #WorldTour #TrottBaileyUniversity http://KimroyBailey.com #RenewableIsRELIABLE ity dia TeamKB Andao #KeepBelieving!
Misintona ireo rakitra famolavolana rafitra manohana ny masoandro ary ireo antontan-taratasy PDF mifandraika amin'ity andiany dingana amin'ny dingana solar ity tsindrio eto mba hamoronana kaonty maimaimpoana ao amin'ny Trott Bailey University ary mamoha ny torolàlana fametrahana Rooftop manontolo.
Oniversite Trott Bailey - Fanaperana marobe-an'arivony tapitrisa
Midira ao amin'ny làlam-pifidianana FULL byStep avy amin'ny Step Solar amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny $ 1,818 / Fitsapana maimaim-poana amerikana.
Ny orinasa Kimroy Bailey an'ny orinasa dia manana ny lafatra Packages ny masoandro ho an'ny tokantranonao, trano fisakafoanana, trano fandraisam-bahiny na fividianana ny dingana vita amin'ny dingana solar ary mandeha avy amin'ny vao manomboka mankany amin'ny matihanina solosaina karama ary mametraka ny masoandro amin'ny fahatokisana.
11Oct Oktobra 11, 2012
Sampana mpianatra UTech IEEE
Ny University of Technology, Jamaica Institute of Electrical and Electronics Engineer (IEEE) Sampana Mpianatra dia naseho vao haingana tao amin'ny ... hamaky bebe kokoa
Ny fanolorana ny loka ho an'ny tanora praiminisitra
Ity publication ity dia nalaina tao amin'ny Jamaica Observer tamin'ny datin'ny 14 martsa 2013. Te hanokana ny fanendrena ahy ... hamaky bebe kokoa
12Mey Enga anie 12, 2013
Dingana 3 Fampivoarana ho any Jamaika azo havaozina 100%
Ny talata 16 aprily 2013 aho dia nanolotra tamin'ny fampisehoana Inaugural ny Ekipa Energy Energy Energy Expo amin'ny 100% ... hamaky bebe kokoa
13Aug Aogositra 13, 2013
Digital Camp Camp digital yard & KB
Tamin'ny 17 Jolay 2013, ny Kimroy Bailey & Digital Yard Foundations dia niara-niasa tamin'ny hetsika voalohany nataon'i Robotics an'ny Kilonga voalohany ... hamaky bebe kokoa
17Feb Febroary 17, 2013
Fonony mpanara-maso: KB Blogger ny taona
Ny pejy fandrakofana ho an'ny Fizarana Karir sy ny Fanabeazana ao amin'ny Mpanara-maso ny Alahady mamaky: 2012 Blogger of the Year ... hamaky bebe kokoa
05Sep Septambra 5, 2014
Fampisehoana fahitalavitra robotika, angovo azo havaozina sy fambolena
Ny fandraisana anjaran'ny tanora any Jamaika dia mijanona ho tsy miovaova. Ny feon'ny tanora dia tsy ampy amin'ny fanapahan-kevitra sy ny fampandrosoana ny politika. Talk ... hamaky bebe kokoa
16Feb Febroary 16, 2015
Vokatra omen'ny fanavaozana an'ny Yam
Ny Kimroy Bailey Foundation dia mitsinjo ny vokatra avy amin'ny: yam voankazo voa, mofomamy ary mofomamy amin'ny kaopy mavo ... hamaky bebe kokoa
16Jul Jolay 16, 2013
Famoronana injeniera amin'ny sekoly ambaratonga fototra sy sekoly faharoa
Digital Yard Foundation, amin'ny fiaraha-miasa amin'ny University of Technology, Jamaica (UTech), no hampiantrano ny Symposium Robotics voalohany amin'ny ... hamaky bebe kokoa
30Jul Jolay 30, 2018
Ny fijerena ny angovo manerantany afaka manana ny rivotra ve ianao? Azonao atao ve ny mividy? Izy ve no mipoitra ve any amin'ny firenena voafantina? ... hamaky bebe kokoa
02Apr Aprily 2, 2013
Resadresaka HOT102Fm miaraka amin'ny tompon'andraikitra amin'ny praiminisitra
Ny talata 2 aprily 2012, dia nasaina hanatevin-daharana ny tontolon'ny haino aman-jery an'ny praiminisitra tanora niresaka aho ... hamaky bebe kokoa